IApartment efudumeleyo eneJongo leSixeko kwiBarrio El Golf
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMariela
Qala usuku lokwenza ikofu kwikhitshi eliqaqambileyo nelipholileyo. Buyela emva kwisofa ngencwadi phakathi kwemigangatho ecacileyo yomthi oqinileyo, ihombiso enomtsalane, kunye neefestile ezinkulu ezibonelela ngembono yesixeko. Yonwabela isidlo sangokuhlwa kwitafile yeplanga yakudala, emva koko uye kuqubha kwidama ekwabelwana ngalo.
Hamba uye kwindawo yokutyela ekufutshane nakwiziko laseCostanera lokuthenga izinto ezintle kakhulu
“Kangangeminyaka emininzi ndingunobhala welizwe lasemzini. Uya kulibona ibali lam libonakala kwindawo yam.”
- Mariela, umbuki zindwendwe wakho
I-King bed, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama
I-Queen bed, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama
4.94 (iingxelo zokuhlola 188)
Indawo yokuhlala ikwindawo yeBarrio El Golf kwaye kumgama wokuhamba weendawo zokutyela kunye neevenkile eziseCostanera Centre. Dlala umjikelo wegalufa kwibala elikufutshane laseLos Leones, emva koko undwendwele iJardín botánico Chagual ekufutshane.
Umgama ukusuka eSantiago International Airport
imizuzu eyi-21 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Mariela
Umbuki zindwendwe wakho akazokubakhona endlwini kodwa uza kufumaneka xa kukho nantoni na oyidingayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Las Condes